Fa maninona no manampy ny fitantanana ny lalàna ny fakan-tsary? | Vahaolana OMG
Ny teknôlôjia dia voafaritra ho toy ny andiany fahaizana, fahalalana, na fahaiza-manao ampiasaina amin'ny alàlan'ny zavatra vita amin'ny artifika mba hahatratrarana farany; Nefa eo amin'ny sehatry ny filaminana, inona no hiafarany? Toa miharihary fa ny mampihena ny heloka bevava, na izany aza, ny fifikirany dia tsy mifamatotra hatrany amin'izany.
Hatramin'ny fiandohan'ny tantara, ny olombelona dia nitady ny hiampitana ny halavan'ny tsy fahalalana ary izany dia nitarika ny teknolojia ara-teknolojia fototra, fa tena ilaina amin'ny fivoarana manaraka, toy ny kodiarana, metallurgy, sns.
Ny fakan-tsary amin'ny vatana dia fitaovana fandraisam-peo natao mba hitafiana amin'ny fanamiana mpitandro ny filaminana, manome horonam-peo an-tsary ny zava-nitranga avy amin'ny fijerin'ilay mitafy, amin'ny fampiharana ny asany.
Ny masoivoho mpampihatra lalàna dia mampiasa fakantsary “body video” (CVC) mba handrenesana feo sy sary amin'ny fotoana tena izy mandritra ny zava-misy sy ny fifaneraserana amin'ny mpikambana ao amin'ny besinimaro, ny vavolombelona sy ny ahiahiana hampiasa azy ireo ho avy amin'ny fanadihadiana ary hanangona porofo. Ireo firaketana an-tsoratra miaraka amin'ny CVC dia manome sanda ny porofo voangona; tsy tokony ho hita ho loharano tokana ihany izany.
Ny rafitry ny HVAC dia misy fakan-tsary kely miraikitra amin'ny fanamiana polisy na solomaso solomaso na nitafy fiarovan-doha, izay mirakitra feo sy sary mandritra ny fifandraisan'ny polisy amin'ny vahoaka. Ny fampahalalana nomerika voarakitra dia mirakitra zava-nitranga tamin'ny fomba fijerin'ny tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asany.
Ny CAC dia natao hanoratana an-tsoratra an-tsoratra an-tsoratra an-tsoratra an-tsoratra izay hanome antontan-taratasy tsy azo antoka sy marina ary tsy misy porofo izay misy ireo manamboninahitra mirindra ao amin'ireo sampana mpanafika. Ny tanjon'ity fomba fanao ity dia ny fanamafisana ny fangaraharana sy ny fandraisana andraikitra raha toa ny resaka na ny ahiahy nipoitra na raha toa ny fiampangana tokony apetraka vokatry ny tranga iray, ary manome porofo ho an'ny fanenjehana raha misy ny tranga iray. tsy maintsy narahin'ny asa ratsy.
Ny masoivoho mpampihatra lalàna dia nanao fandinihana natao momba ny fampiasana ny CVC izay nahitana fandinihana lalina momba ireo olana momba ny tsiambaratelo ary ireo olana ara-dalàna na politika. Ny fitaovan'ny CAC sy ny teknolojia dia mivoatra haingana, ary ny masoivoho dia mamerina mijery ny politikany, ny paikadiny ary ny fitaovany mba hahazoana antoka fa ny fampiharana ny lalàna mahomby indrindra. Ity lafiny amin'ny asa ity dia misy ny fikarohana sy ny tetik'asa mpanamory hizaha teknolojia vaovao. Ny tanjon'ireo masoivoho fampiharana ny lalàna dia ny hanomezana ireo mombamomba ny haitao sy ny fitaovana haino aman-jery sosialy mba hanatsarana ny fahafahan'izy ireo hamaly ireo zava-misy vaovao ary eo am-piantohana ny fiarovana ny daholobe sy ny mpitandro ny filaminana.
Ny fitsapana ihany koa dia nanondro ny toetran'ny CAC hanombanana tsara kokoa ny filan'ny maso ivoho mpampihatra lalàna amin'ny alàlan'ny famerimberenana ireo tranga misy amin'ny fampiasana hery. Miorina amin'ny mason-tsivana sy ny masontsivana nomen'ny scenario azo averina, azo natao ny nifantoka tamin'ny fiovana manokana mifandraika amin'ny lafiny rehetra amin'ny fampiasana hery ara-batana mba hamaritana ny toerana tsara indrindra hametrahana ny fakantsary amin'ny polisy manao ny asany sy amin'ny toetra tsy maintsy ananan'ny CVC hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanangonana porofo.
Mampiasa teknolojia vaovao ny serivisy polisy mba hitazomana ny polisy sy ny olon-tsotra izay ifandraisan'izy ireo amin'ny asa rehetra. Ny CVC dia manome mangarahara sy fandraisana andraikitra bebe kokoa ho an'ireo rehetra voakasik'izany ary mampiseho sary mombamomba ny zava-misy atrehin'ireo mpitandro filaminana matetika amin'ny toe-javatra mahery vaika sy mahery vaika. Ny tetikasa toa an'ity dia afaka manombana sy mamaritra ny sanda ampiana fitaovana vaovao ho an'ny polisy. Amin'ny maha-polisy maoderina azy ireo, ireo masoivohon'ny mpampihatra lalàna dia tsy mitsahatra manadihady sy manombatombana ny haitao vaovao hanatanterahana ny baikony hiarovana ny sivily. Ny tanjon'ity fomba ity dia tsy miova - ny fanomezana ny mpikambana ao amin'ny maso ny lalàna fitaovana ilain'izy ireo handresena ireo fanamby mifandraika amin'ny tontolon'ny polisy ankehitriny amin'ny tontolo miovaova hatrany.
Ny loza mety hitranga amin'ny tsiambaratelo dia fantatra nandritra ny Fandaharam-pinoana momba ny tsiambaratelo (PIA), ary ireto torohevitra manaraka ireto dia natao hanalefahana azy ireo:
Ny masoivoho mpampihatra ny lalàna dia hamolavola politika iray mba hiantohana ny fihazonana, ny fanafoanana ary ny fitahirizana ireo rakitsoratra vita amin'ny alàlan'ny CVC;
Ny talen'ny fampiharana ny lalàna dia tsy hirakitra an-tsoratra ny fifandraisany rehetra sy ny resaka nifanaovan'ny mombamomba ny vahoaka;
Rehefa mampiasa ny CVC amin'ny mombamomba ny andraikiny ny mpikambana ao amin'ny maso ivoho dia hataony an-kalalahana izany
Raha araka izay azo atao, dia hanoro hevitra ny olom-pirenena ireo mpikambana ao amin'ny sampan-draharahan'ny fampiharana ny lalàna;
Amin'ny faran'ny fihodinana tsirairay, ny horonan-tsarimihetsika rehetra dia hampakarina amin'ireo masoivoho nekena fitaovana fitahirizana azo antoka ho an'ny fampahalalana, fihazonana ary fanariana;
Afaka mangataka ny hahita ny mombamomba azy ireo ny olom-pirenena. Ny fangatahana fidirana amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny CAC izay natao teo ambanin'ny Lalàna momba ny fidirana amin'ny fampahalalana sy ny lalàna momba ny tsiambaratelo dia azo alefa amin'ny alàlan'ny pejin-tranonkala ATIP.
Ny fampiasana CAC dia hampahafantarina amin'ny besinimaro, indrindra any amin'ireo sampana misy kamerà, ary ao anatiny ireo mpikambana ao amin'ny sampan-draharaha mpampihatra lalàna mba hampahafantatra azy ireo ny politika sy ny fomba fanao tsara indrindra momba an'io.
Ny CAC dia ampiasaina hanangonana porofo amin'ny famotopotorana heloka bevava ary hanatanterahana ny fanoloran-tenan'ireo masoivoho mpampihatra lalàna hanorina fifandraisana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ireo trano azo antoka sy vondrom-piarahamonina azo antoka manerana ny firenena. Ny fampiasana ny CACs dia hanohana ny baikon'ny maso ivoho mpampihatra lalàna koa hisorohana ny asan-jiolahy, hanadihady ny fandikan-dalàna, hitandro ny fandriampahalemana, hampihatra ny lalàna ary hitondra ho amin'ny filaminam-pirenena. , hiantohana ny fiarovana ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta, ireo olo-manan-kaja mitsidika, sy ireo mpikambana ao amin'ny iraka vahiny, ary hanome serivisy fanohanana ilaina amin'ny maso ivoho mpampihatra lalàna hafa. Rehefa mifampiresaka amin'ny besinimaro dia hampiasa CAC araka ny fahaizany misafidy ny mpikambana, arakaraka ny politikam-pifandraisan'ny besinimaro. Ireo masoivohon'ny mpampihatra lalàna dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny mombamomba anao voaangona ary manohy mandinika ny politikany sy ny fomba fanaovany izay hahazoana antoka fa manara-dalàna izy ireo.
Fa maninona no manampy ny fitantanana ny lalàna ny fakan-tsary? no farany niova: Desambra 2nd, 2019 by Admin
4355 Total Views 3 Views Today